Eli phepha linolwazi nge Keto-Plus Shampoo ye ukusetyenziswa kwezilwanyana .
Iimpawu zeKeto-Plus Shampoo
Izilumkiso kunye nezilumkiso zeKeto-Plus Shampoo
Isikhokelo kunye nolwazi lwedosi yeKeto-Plus Shampoo
Umenzi: Clipper (Phoenix Pharm.)
(I-Chlorhexidine 2%, iKetoconazole 1%)
Eyenzelwe izinja, iikati kunye namahashe
Ifomula yokusebenzisana apho i-spectrum ebanzi ye-antimicrobial & antifungal agents inokufumana inzuzo
YOKUSETYENZISWA KWEZILWANYANA KUPHELA
QHUBEKA UKUFIKELELA KWABANTWANA
Chlorhexidine Gluconate 2% kunye neKetoconazole 1%.
iyeza elomeleleyo losuleleko lwesono
Iipropati: I-Keto-Plus Shampoo yonyango lwe-shampoo ene-antiseptic (i-antibacterial kunye ne-antifungal) eyilelwe izinja, iikati kunye namahashe aneemeko zesikhumba eziphendula i-Chlorhexidine kunye neKetoconazole.
Shake kakuhle ngaphambi kokusetyenziswa. Manzisa idyasi yeenwele ngamanzi afudumeleyo kwaye usebenzise isixa esaneleyo soshampu. Massage ishampu kwimpahla emanzi yengubo, intambo ngokukhululekileyo. Hlamba uphinde uphinde. Vumela ukuhlala kwizinwele imizuzu emi-5 ukuya kweli-10, emva koko uhlambe kakuhle ngamanzi acocekileyo. Ingasetyenziselwa amaxesha ama-2 ukuya kwayi-3 ngeveki kangangeeveki ezi-4, ukunciphisa kube kanye ngeveki, okanye njengoko kuyalelwe ngugqirha wezilwanyana.
Gcina kude nokufikelela kwabantwana. Hlamba izandla emva kokusetyenziswa. Ukusetyenziswa kwezilwanyana kuphela. Ukusetyenziswa kwangaphandle kuphela. Gwema ukudibana namehlo okanye inwebu yangaphakathi. Thintela ukungenisa.
Izilumkiso: Umthetho waseburhulumenteni (i-USA) ulithintela eli chiza ukuba lisetyenziswe okanye ngokomyalelo wezilwanyana ezinelayisensi. Ukuba isikhumba esingafunekiyo siyakhula okanye siyanda, yeka ukusebenzisa kwaye uthethe nogqirha wezilwanyana. Ukuba ukudibana kwamehlo kuyenzeka, hlamba kakuhle ngamanzi kwaye ubonane nogqirha wezilwanyana.
Gcina kubushushu begumbi elilawulwayo.
Iyafumaneka ngooGqirha bezilwanyana abaneLayisensi kuphela.
Yenziwe: ICLIPPER DISTRIBUTING, eSt. Joseph, MO e-USA
I-12 OUNCES ZAMANQAKU (355 mL)
iioxycodone acetaminophen 5 325 espanol
Inombolo ye-NAC: 1256175.2
ICLIPPER DISTRIBUTING CO., LLC
Iindleko zezabelo PHOENIX PHARMACEUTICAL INC.
1302 UMZANTSI 59 STREET, ST. UJOSEFA, MO, 64507
Idesika yoMyalelo: 800-759-3644
Indawo yeWebhusayithi: www.kutsho.net
Yonke imizamo yenzelwe ukuqinisekisa ukuchaneka kolwazi lweKeto-Plus Shampoo olupapashwe apha ngasentla. Nangona kunjalo, kuhleli kuluxanduva lwabafundi ukuba baziqhelanise nolwazi ngemveliso equlethwe kwileyibhile yemveliso yase-US okanye into yokufaka iphakheji.
yeyiphi imemori ekwikhompyuter yam
ukucoca njani ilaptop screen
indlela yokusebenza ye-metoprolol
Ngaba i-acetaminophen iyachasa ukudumba
lide kangakanani ixesha lokuba i-clonidine isebenze